Lalàm-panorenana Vaovao Ho An’i Côte d’Ivoire · Global Voices teny Malagasy
Lalàm-panorenana Vaovao Ho An'i Côte d’Ivoire
Voadika ny 08 Novambra 2016 2:19 GMT
Antenimieram-pirenena ao Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) CC-BY-30
Betsaka ireo Ivoariana no nifidy nandany ny lalàm-panorenana vaovao, na teo aza ny antson'ny mpanohitra mba hanaovana ankivy ny fifidianana. Manavao ireo andrim-panjakana Ivoariana io lalàna vaovao io, ary manao ho fanamby ny hiainana miaraka – fanamby iray izay mbola miankina amin'ny mpanohitra – ao anaty firenena iray izay voazarazaran'ny fifampiandanian'ireo foko sy finoana.
Alahady 30 Oktobra, 6,3 tapitrisa ireo ivoariana no nantsoina handatsa-bato mba hilaza ny heviny momba ilay fanavaozana lalàm-panorenana natolotr'i Alassane Ouattara, Filoha voafidy fanindroany indray tsy ela akory izay, Nandritry ny fampielezankevitra nataony, nataon'ity farany ho lohalaharana amin'ireo fampanantenana tamin'ny fifidianana ny sosokeviny hanavaozan ny lalàna fototra eo amin'ny firenena. Fanolorantena nohamafisiny tamin'ny Novambra nandritra ny fanokanana azy : « Ireo fanovàna tiantsika hatao dia handray anaty kajikajy ny tantarantsika, ny kolontsaintsika ary ireo soatoavina tiatsika hampiroboroboina ho an'ilay Côte d’Ivoire vaovao ». Taorian'ny fifidianana nirindra tsara sy tao anaty fitoniana, tsy latsaky ny 93,2 % tamin'ireo vatom-pifidianana no nanohana ilay tetikasa. Ny 1 Novambra lasa teo, i Youssouf Bakayoko, filohan'ny Komity tsy miankina miahy ny fifidianana (CEI) no nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fandresen'ny “eny” izay efa azo an-tsaina mialoha ihany. An'ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana sisa no mampanan-kery ilay lalàna, mba hanokafana làlana ho an'ny repoblika ivoariana fahatelo.
Raha kely monja ny fisalasalàna ny ho fahalanian'ilay lalàna naroson'ny filoha Ouattara, dia ny tahan'ny fandraisana anjara no tena manandanja tamin'ity fifidianana ity. Niantso fanaovana ankivy ny avy amin'ny fanoherana – tetikady noraisina taorian'ny fahalanian'i Ouattara indray hitondra fanindroany, tamin'ny isanjato tsy latsaky ny 83,66 % tamin'ny vato manankery. Tena tsy azo inoana araka izany hoe handiso ny filoha ivoariana ilay fifidianana tena manakaiky ny fankatoavana ny filoha tahaka izany. Ny hevitra dia ny hamingana io lalàna io, amin'ny fampandresena ny maro an'isa sy ny tsia manerana ny firenena. Miaraka amin'ny fandraisana anjara 42% – salanisa ambany indrindra tany atsimon'ny firenena – azo lazaina ho fahombiazana ilay fanentanana hanao ankivy. Aoka ho tsiahivintsika fa efa fomba tsy hita izay maharatsy azy ao Côte d’Ivoire ny taha ambany amin'ny fandraisana anjara, ary ho an'ny fifidianana filoham-pirenena, dia 54,63 % izany. Raha jerena ny elanelan'isa, dia lavitra be ilay fandàvana nasionaly noeritreretinireo mpanohitra. Nahatsapa mihitsy aza i Joël N’Guessan, mpitondra tenin'ny Fiaraha-mientan'ireo Repoblikàna (RDR), lizay antoko misy ny filoha, fa isa “mendri-boninahitra” io.
Saingy tsy hampangina ireo mpanohitra io fandresena tamin'ny latsabato io. Tena tezitra tokoa araka izany ny sasany.. Pascal Afffi N’Guessan, filohan'ny Mandatehezam-bahoaka ivoariana (FPI – ny tena antoko mpanohitra) dia nanao vava henjana talohan'ny fifidianana : « Amin'ny fanapahanay hevitra ny hisintaka, dia esorinay amin'io Lalàm-panorenana io ny fanànany endrika demaokratika. Lazainay ny tsy fahombiazany amin'ny resaka fampihavanana ny samy ivoariana, mba hananganana andrim-panjakana demaokratika. » Raha jerena ny fihodin'ny toedraharaha, dia voa tamin'ny teniny ity farany, ary tsy nahay nametraka io fiahiahiana ny tsy maha-ara-drariny io. Ireo pejy 154, izay nolanian'ny parlemanta tamin'ny 11 Oktobra lasa teo, dia nahazo fanohanana mavesatra ihany koa tamin'ny fitsapankevibahoaka, ary nihasarotra hatrany izay rehetra fanoherana goavana natao tamin'ny dingan'ny fampandaniana ilay lalàna. Ny famelezana ny votoatiny sisa no hany tavela, izay tsy nihafihafian'ireo mpanohitra. « Endrika hita mason'ny fanjanahana ny ampahany amin'ny firenentska ataon'ireo olona avy any ananona any io lalàm-panorenana io », tamin'ny Alarobia teo no nambaran'i Innocent Anaki Kobena, minisitr'i Laurent Gbagbo izany.
Kanefa, mamadika ny pejin'ireo fisarantsarahana sy ireo olana politika naharitra am-polo taona maro io lalàna io, amin'ny fametrahana amin'ny toerany ireo fepetra voalazan'ireo fifanarahana Linas-Marcoussis. Ho fampahatsiahivana, andinin-teny natao hivoahana amin'ny olana izy io, nosoratan'ny ankamaroan'ireo hery politika ivoariana, teo ambany fanarahana maso nataon'ny Firenena Mikambana sy ny Firaisambe Afrikàna, ny ampitson'ny ady an-trano voalohany, tamin'ny Janoary 2003. Nahilik'Ing. Gbagbo, izay nosoloan'i Alassane Ouattara toerana izy ireny. Araka izany, apetrak'ilay lalàm-panorenana vaovao ho tsy maintsy atao ny fanabeazana sy ny fampitoviana ny lahy sy ny vavy any anatin'ireo laharam-pahamehana eo amin'ny firenena. Foanany ihany koa ny fampiasàna ilay fiteny hoe « ivoirité », fepetra mitondra fifandirana napetraky ny Andininy faha-35 ao anatin'ilay lalàm-panorenana ankehitriny. Lazainy fa tsy afaka mirotsaka hofidiana avokoa ireo kandidà ho filoha raha tsy « manana fiaviana ivoariana, teraka avy aminà ray sy reny samy ivoariana ». Nampizarazara izay tsy izy ny samy ivoariana io fepetra io tany aloha tany, ary nitondra ny adihevitra ho any amin'ny olana saropadin'ny maha-izy ny firenena iray vao avy nivoaka taminà ady an-trano.
Apetrak'ilay lalàm-panorenana vaovao ivoariana ihany koa ireo fanovàna ara-drafitra. Araka izany, natsangany ny toeran'ny filoha lefitra. Hofidiana miaraka amin'ny filohan'ny Repoblika ity farany, ao anaty takelaka iray roaloha, ary hiantoka andraikitra roa – fitohizan-draharahan'ny mpanatanteraka. Kendren'io toerana vaovao io, etsy andaniny, ny hanamafy ny fisarahan'ny fahefana eo amin'ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka, miaraka amin'ny fandimbiasan-toerana vonjimaika ataon'ny filohan'ny Antenimieram-pirenena, raha misy fahabangan-toeran'ny filohan'ny Repoblika.
Omanin'ilay lalàm-panorenana vaovao ihany koa ny fananganana antenimieran-Doholona. Ny « efitra ambany » voatsangana amin'izany dia handray ireo solontenan'ny fiaarahamonin'olompirenena, ny avy amin'ny faritra, ny antoko politika, ireo mpitarika ara-pomban-drazana, ireo mpitarika ara-pinoana, ny vehivavy, ny tanora, sns… Ho feon'ireo vitsy an'isa tsy mba heno any amin'ny Antenimieram-pirenena – anjakan'ny maro an'isa – araka izany ny ao amin'ny antenimieran-Doholona – safidy laika mahaliana ao anatinà firenena iray izay mbola mifàka lalina ao aminy ny fizarazaràna ara-pinoana. Ny tanjona aranty dia ny fampandrenesana feo iray hafa mba hanatsaràna ny adihevitry ny fanaovana lalàna, no sady hiantohana ny tsy haha-tsy azo ivalozana ny teny farany avy amin'ny Antenimieram-Pirenena, satria izy no voafidim-bahoaka mivantana amin'ny ankapobeny. « Tanjona farany katsahan'ireny fanavaozana rehetra ireny ny hanome an'i Côte d’Ivoire lalàm-panorenana iray maoderina sy hametrahana amin'ny toerany andrim-panjakana tsy mifanipaka, matanjaka, manaja ny fahasamihafàna sy miaro ny fahalalahana », hoy i Alassane Ouattara nanazava tany alohan'ny fifidianana. Araka izany, fanamby iray hiaina miaraka, izay tsy hisy anefa raha tsy eo ny fankatoavana – sy finiavana – avy amin'ireo mpanohitra.